April 11, 2010 by chowutyee ၀က်သား ဆာတေးကင်
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 11 Comments	11 Responses
YKKO က ၀က်ဆာတေးနဲ့ ငါဟာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ. ဟီးဟီး…🙂
Lue ရေ Cream ဆိုတာ Ready Made Creamစက္ကူဗူးတွေကို ပြောတာပါ။ Cream ဗူးက ဖောက်ပြီရင် ကြာရှည်မခံတာမို့ သိပ်လည်း အသုံးမခံပါဘူး။ ၀တ်ရည်ကတော့ creamဗူး သုံးမယ့်အစား ကော်ဖီမှုန့်မှာသုံးတဲ့ creamမှုန့်ကို ရေနွေးနဲ့ခပ်ပျစ်ပျစ် ဖော်ပြီ ထည့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်… ၀က်ဆာတေးက ဆိုင်ကထက် ပိုစားကောင်းတယ်..😛
ဟုတ်တယ် ကိုငြိမ်း .. Milk Cream ကိုပြောတာပါ… လုပ်စားကြည့်ပါနော်… ဒီဝက်စာတေးကင်က အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်…🙂
Wet Thar ko htoe tae Doat ko yae seain htar ya tar htae pyaw kae ohn ma paw, Nyi ma yae, no mo so, mee kin taeakhar doat tway kyan kone mar paw kwae😀
ဟုတ်ကဲ့ပါ အခုလို ဖြည့်စွက်ပေးလို့ ၀တ်ရည်က အထူးကျေးဇူးပါနော်။ တခါတလေ ဟင်းချက်နည်းမှာ လိုအပ်တာ၊ ကျန်ခဲ့တာတွေ ရှိရင် နားလည်ပေးပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ခုဝက်သား ဆာတေးကင် ချက်နည်းမှာ ပြန်ဖြည့်စွက်ထားလိုက်မယ်နော်.. Thanks😛
milk cream ကပိုပြီ မြန်မာပြည်မှာ ရှာရလွယ်တယ်။ ပြီတော့ ဈေးသက်သာလို့ပါ။ ပြီတော့ cream တွေက သိပ်ကြာရှည်မခံဘူးရယ်။ ၀ယ်ပြီ ချက်ချင်းသုံးနေမှ၊ မဟုတ်ရင် expire ဖြစ်တာနဲ့၊ မကောင်းတော့တာနဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ချက်နည်းတိုင်း cream မသုံးဖြစ်တော့၊ ရှာရလွယ်ပြီ ဈေးသက်သာတာကို ပဲသုံးဖြစ်တယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ..🙂